openSUSE yazivisa kuburitswa kwepakati kuvaka ... Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | 14/10/2021 08:04 | Yakagadziridzwa ku 14/10/2021 18:23 | Noticias
Munguva pfupi yapfuura iyo vagadziri ve openSUSE projekiti yakavhurwa kuburikidza ne blog post chinangwa chako chekugadzira imwe yepakati "Respin" inovaka, mukuwedzera kune kuunganidzwa kuri kuburitswa kamwe pagore panguva inotevera kuburitsa kwekugovera.
Izvo zvinotaurwa kuti Respin anovaka anosanganisira ese anowedzera ekuwedzera mapakeji yeiyo yazvino vhezheni ye openSUSE Leap. Izvi inobvumidza optimization kuitwa iyo inoshandura mukuderedza huwandu hwedata rakadzvanywa kuburikidza nemambure uye irwo rubatsiro rukuru kumushandisi, sezvo ichidzivirira kuva nekupedza nguva pane zvakanzi kurodha pasi, izvo zvinodikanwa kuunza kugoverwa kuchangobva kuiswa kuhurumende iripo.
Kune avo vasingazivikanwe neakavhurikaSUSE Linux, iwe unofanirwa kuziva kuti ichi ndicho chimwe chezvikamu zveLinux izvo zvaive zvinoenderana nekwakabva muSlackware. Pakati pehunhu hukuru hwekuparadzira uku ndekwekuti ndeimwe yezvinhu zviri nyore kumisikidza nekuisa, sezvo iine graphical vabatsiri kupedzisa akasiyana mabasa, kunyanya nekuda kwekuisa kwayo kukuru uye yekugadzirisa turu.
Kugovera kunoonekwa nekugadzikana kwayo, asi ikozvino nekukurumidza, Kunze kweizvozvo ndechimwe chekare chakagoverwa icho chiri mukuenderera mberi kusimudzira uye iko zvino uchifunga nezve zvataurwa nevashandisi chirongwa ichi chichagadzira kuwanda kwese kwekugovera.
Mukupindura kumhinduro kubva kuvashandisi veSUSE yakavhurika, Leap anotarisira kuve nekuvaka patsva kweanogovana mukota kana zvichidikanwa munguva pfupi inotevera.
Aya mafemo, ayo anovaka zvakare ISO mufananidzo, achagamuchira kuvhuraQA kuyedzwa uye ichave iine mutinhimira kuburitswa izvozvi sezvo gadziriro yekumisikidza yapera.
Aya mafemo anotendera vashandisi kutora mukana weazvino mabug fixes uye kugadzirisa nekukasira, kudzikisira bandwidth yeku online zvinowedzeredza mushure meGeneral Kuwanikwa (GA) vhezheni yekumisikidza. Yakagadziriswa ISO mifananidzo inogona kugadzirisa mapakeji senge GRUB uye shim kugadzirisa aya bootloader uye firmware mapakeji evashandisi.
Vagadziri taura kuti vakaronga pakati pezvirongwa zvavo kuti iyo ISO mifananidzo nezvivakwa zvepakati kuburitswa nguva nenguva izvo zvavanofunga zvakakodzera (zvinogona kunge zviri zvebhimwedzi, zvekota kana zvemwedzi mishoma yega yega), nekuti OpenSUSE inotora mukana weyakavhurikaQA bvunzo kuyedza kuvimbisa kuti idzi nyowani dzeshanduro dziri mumamiriro akanaka.
Ivo vanotaurawo izvozvo ye openSUSE Leap vhezheni 15.3, Respin inovaka kuti ionekwe ichaverengerwa se "15.3-X" uye kuti mushure meinotevera Respin kuvaka yaburitswa kuti iise zvazvino bug fixes uye mapakeji ekuvandudza mune maIOs ivo pachavo kudzikisa nguva uye bandwidth.
Iko kuvaka kwekare kuchabviswa kubva ku get.opensuse.org saiti, izvi kuitira kudzivirira vashandisi kubva mukuwana vhezheni dzakapfuura uye chinhu chimwe chete icho ivo vari kuyedza kudzivirira kubva pakuita zvisina kukodzera kurodha pasi kwekuvandudzwa kwakatove kwakabatanidzwa mune yazvino vhezheni yakaburitswa.
Sezvatakambotaura pamusoro pezita remazita rinozopihwa kumifananidzo yakagadziridzwa yeIO, zvine nhamba yekuwedzera muzita refaira senge 15.3-X kuvasiyanisa neiyo GA vhezheni, mukuwedzera kune iyo vanozove necheki yakatarwa pane iyo mifananidzo yakamboburitswa.
Vashandisi vanogona kutarisira Leap twist nyowani mushure meiyo SUSE Linux Enterprise kuvakazve nezvikonzero zvakafanana sezvo vese Leap uye SLE zvakabatana.
Zvakafanana neakavhurikaSUSE Tumbleweed blogs, yega yeLeap respin inotarisirwa kuve nechinyorwa chakatumirwa paNews.opensuse.org iyo inopa vanhu ruzivo nezve izvo zvakavakwazve zvashandurwa kana kugadziriswa, izvo zvichave zviripo mugogi reshanduro kurodha pasi. org.
Nekupedzwa kwegadziriro yekumisikidza uye kwekutanga kuvakazve, iyo bvunzo mhedzisiro inoratidza musiyano mudiki kubva kwekutanga GA kuburitswa kweLeap 15.3; basa rinoenderera mberi uye new spin ichave ichiwanikwa munguva pfupi.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve katsamba, iwe unogona kutarisa iyo yekutanga posvo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » openSUSE yazivisa kuburitswa kwepakati pekuvaka